5 daawo oo dabiici ah oo lagu daaweeyo calaamadahooda | Bezzia
Tony Torres | 13/01/2022 20:00 | Khiyaamada quruxda
Calaamadaha fidsan ayaa ka soo baxa maqaarka marka uu aad u kala fidsan yahay oo fiilooyinka bixiya kolajka iyo elastin ayaa jebiya maqaarka maqaarka. Daqiiqadaha ugu horreeya, calaamadahaan waxaa lagu soo bandhigaa midab casaan ama guduudaniyada oo ay sabab u tahay jabinta fiber-ka. Dabadeed, waxay isu beddelaan caddaan waxayna ku sii jiraan maqaarka weligood.
Marka calaamadaha fidsan ay soo baxaan waa la daaweyn karaa, muuqaalka waa la hagaajin karaa si calaamaduhu u noqdaan kuwo aan la fahmi karin. Laakin marka ay degaan, marka ay cadaadaan, aad bay u adag tahay in laga takhaluso. Xitaa daawaynta qolalka ugu qaalisan ma bixiyaan natiijooyin la taaban karo. Si kastaba ha ahaatee, hagaajinta muuqaalka maqaarka waa suurtagal, labadaba badeecooyin gaar ah, iyo dawooyinka dabiiciga ah sida kuwa aan hoos kuugu dhaafno.
1 Daawaynta ugu fiican, ka hortagga
1.1 Daawooyinka calaamadaha fidsan
Daawaynta ugu fiican, ka hortagga
Calaamadaha fidsan, sidaan sheegnay, waxaa soo saara jebinta fiilooyinka maqaarka. Tani waxay dhacdaa marka maqaarku si aan caadi ahayn u kala fidsan yahay, badanaa inta lagu jiro miisaanka degdega ah ayaa isbeddelaya. Waxay kaloo dhacaan xilliga uurka, ma aha oo kaliya sababtoo ah isbeddelka miisaanka, laakiin sidoo kale sababtoo ah arrimaha hormoonnada. Sababaha kale ee soo noqnoqda waa dhaxalka hidda-socodka, isticmaalka daawooyinka qaarkood ama cunto xumo aan daboolin nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah jirka.
Si looga hortago inay soo baxaan calaamadaha fiditaanka maqaarka, waxaa fiican in la qaado tallaabooyin ka hortag ah. Kan ugu horreeya oo ugu muhiimsan waa fuuq-baxa, sababtoo ah maqaarka fuuqbaxay waxay u badan tahay inuu daciifo oo jebiya. Labaad waa cunto. Cun cuntooyin dabiici ah, raac cunto kala duwan, dheellitiran oo dhexdhexaad ah si aad u xakamayso miisaankaaga. Sababtoo ah tani waa furaha saddexaad ee aasaasiga ah ee ka hortagga calaamadaha fidsan.
Isbeddelka miisaanka degdega ah ayaa ah sababta ugu weyn oo ah muuqaalka calaamadaha fidsan ee maqaarka iyo midka ugu badan ee caqabad ku ah daaweyntooda. Isku day inaad miisaan caafimaad leh ku joogtid, haddii aad rabto inaad raacdo cunto caato ah, hubi inay buuxisay baahiyahaaga nafaqeynta si lumintu u noqoto mid horumarsan oo ayan waxyeello u geysan maqaarkaaga. Naftaada geli gacmaha xirfadle waxaadna gaari doontaa yoolalkaaga.
Daawooyinka calaamadaha fidsan
Mararka qaarkood calaamaduhu waxay soo baxaan xitaa markaad daryeesho miisaankaaga iyo maqaarkaaga, sababo kala duwan awgood. Xaaladdaas, waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah daawooyinka soo socda ee calaamadaha fidsan. Daawooyinka dabiiciga ah iyo kuwa guriga ee kaa yaabin doona, noqo mid joogto ah oo mar dhow waxaad ogaan doontaa farqiga.
Saliid yicib macaan. Alaab dabiici ah oo leh sifooyin dib-u-soo-noolayn iyo fitamiin E oo si qoto dheer u fuuqeeya maqaarka.
Aloe Vera. Ku fiican daawaynta calaamadaha fidsan ee cas iyo ka hortagga inay noqdaan caddaan. Si toos ah u mari saxarka aloe vera calaamadaha fidsan, laba jeer maalintii ilaa aad aragto horumar.
Liin dhanaan. Qani ku ah fitamiin C, antioxidant iyo saamaynta caddeynta. Tuuji liin, qooyi suufka suufka ah oo mari calaamadaha fidsan. Ku dhaaf 15 daqiiqo ka dibna ku raaci biyo diirran.
Faras. Marka lagu daro faa'iido badan oo gudaha ah, horsetail si toos ah maqaarka loo mariyo ayaa hagaajinaysa muuqaalka calaamadaha fidsan. Tani waa sababta oo ah waxay cusboonaysiisaa unugyada maqaarka oo dib u soo saartaa. Ku diyaari faleebo leh laba bac oo ku mari dareeraha maqaarka, ku duug dhaqdhaqaaq wareeg ah ilaa la nuugo.
Baradhada. Casiirka baradhada cayriin ayaa aad faa'iido u leh daaweynta calaamadaha fidsan. Tani waa sababta oo ah waa walax ka caawisa dib u soo kabashada unugyada maqaarka. Kaliya waa inaad gooysaa jeex baradho ceeriin ah oo aad casiirkeeda marisid calaamadaha fidsan. Ku dhaaf ilaa 15 daqiiqo marka casiirka baradhadu uu qallalo, ku saar biyo diirran.
Daawooyinkan loogu talagalay calaamadaha fidsan ayaa si la yaab leh waxtar u leh, laakiin si aad u aragto natiijooyinka, aad bay muhiim u tahay inaad joogto. Haddii aad sidoo kale si joogto ah u jimicsi sameyso oo aad raacdo cunto qani ku ah miraha, khudaarta iyo cuntooyinka dabiiciga ah, maqaarkaagu wuxuu ka fiicnaan doonaa gudaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Khiyaamada quruxda » 5 dawo oo dabiici ah oo lagu daaweeyo calaamadaha fidsan